Sary mahavariana natao sira nataon'i Dino Tomic | Famoronana an-tserasera
Dino tomic, mpanaingo tatoazy manan-talenta monina any Kroasia fa monina any Norvezy, dia tia mamorona sary azo tanterahina rehefa tsy manao mpanjifa manao tatoazy izy. Ny sariny, na mitodika any amin'ny singa mampihoron-koditra, foronina siansa, na mitady modely azo tanterahina, dia mitady aingam-panahy amin'ny pulsa tsy mampino.
Tomic, mpanakanto somary tanora izy, manana torohevitra be dia be ho an'ireo izay te-hanatsara ny fahaizany amin'ny kanto. "Ny fomba tsara indrindra hianarana dia ny maka tahaka ny asa fampianarana hafa". "Rehefa manao kopia toy izany sns ianao dia hamorona ny fombanao manokana. Zavatra iray no ianaranao avy amin'ny mpanakanto iray ary avy eo zavatra iray hafa, mandra-pahatongaranao ny fombao. Ity misy a Video miaraka amina sanganasa sasantsasany, ary a resadresaka ny zavatra nataon'izy ireo tamin'ny asany.
Azonao atao ve ny milaza aminay kely momba ny tenanao?
Dino Tomic no anarako ary teraka tany Kroasia aho, saingy nipetraka tany Norvezy aho nanomboka tamin'ny faha-14 taonako. Vao 27 taona aho. Manana mari-pahaizana bakalorea aho ary miasa amin'ny maha-mpanaingo ahy tato amin'ny fivarotako azy any Notodden, Norvezy.
Oviana ianao no nanomboka nanao sary?
Tiako ny manao sary, fony mbola kely aho dia nanoratra tamin'ny zava-drehetra foana. Saingy tamin'ny taona 16-18 dia tena nanomboka nifantoka tamin'ny zavakanto aho. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia mbola tsy nanana andro iray tsy nanoratako zavatra aho.
Mahafinaritra ny andian-tsariny fianakaviana. Inona ny olana atrehinao rehefa manamboatra ireo sombin-javatra ireo ianao?
Misaotra Sarotra izany rehetra izany ary tsy misy fomba tsara kokoa hanehoana ny fahaizanao miasa amin'ny ambaratonga lehibe miaraka amin'ny pensilihazo miloko. Tonga saina ihany koa aho fa mila mampifangaro haino aman-jery hafa amin'ilay tetikasa hampandeha azy, toy ny acrylic sy tsaoka.
Betsaka ny bibikely, fa izany no ampahany mahafinaritra amin'izany. Mianatra amin'ny lesoka vitanao ianao ary mampiasa azy ireo hanararaotra anao.
Inona no fiheveran'ny fianakavianao ny asanao?
Ny reniko sy ny raiko ihany no nahita azy ireo. Ny raibeko sy renibeko dia monina any Kroasia, ka mbola tsy nanam-bintana hahita azy ireo izy ireo. Amin'izao fotoana izao aho dia miasa amin'ny sariko farany lehibe ary rehefa vita izany dia hiezaka aho hijery raha afaka mahita galeriana any Kroasia aho mba hahitanao azy ireo.
Iza na inona no aingam-panahy amin'ny asanao?
Manana lisitr'ireo artista be aho. Saingy ny tena aingam-panahy dia avy amin'ny fahalalana fa miasa mafy toa ahy koa ireo mpanakanto hafa. Izay nahavita ny asa-tanany dia manome aingam-panahy ahy. Ny fijerena fotsiny izay ataon'ny olona sy ny fahafantarana hoe ohatrinona ny fahalalana sy ny asa mafy an-taonany no manome aingam-panahy lehibe ho ahy.
Inona ny sanganasa tianao indrindra ary nahoana?
Tsy afaka milaza hoe iza no tiako indrindra. Fa ny tena reharehako dia ireo sarin'olom-banona lehibe nataoko. Miaraka amin'ny habetsaky ny fotoana itako hamita azy ireo dia mahatsiaro tena mifamatotra amin'izy ireo aho ary tsapako fa manome izay rehetra ananako aho, ary bebe kokoa mba hahatonga azy ireo ho lavorary.
Inona no torohevitra homenao ny olona manomboka manao sary?
Aza kivy ary manaova fanazaran-tena. Mametraha tanjona fa aza variana. Amin'ny fampiasana YouTube, misy mihoatra ny ampy ny horonan-tsary tsara any izay azonao ianarana ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
Mpanakanto tatoazy koa ianao. Mora aminao ve ny mandika ny sary nataonao ho tombokavatsa?
Tsia, tsy ataoko izany. Ny hoditra dia fitaovana iray izay tena sarotra ny miasa, manana famerana be izy io. Mieritreritra ny hampiato ny asako amin'ny maha-mpanakanto tatoazy ahy aho, mifantoka amin'ny sary sy sary hosodoko.
Mahafinaritra, saingy tokony ho tena ara-tsosialy ianao hiasa amin'ny sehatry ny tatoazy, ary tiako ny habaka sy ny fahalalahako rehefa mamorona kanto aho.
Inona no miandry anao amin'ny ho avy?
Manana ny tetikasako manaraka aho, izay manafina tsiambaratelo. Ka raha tianao ho fantatra hoe inona izany dia tsy maintsy manaraka ahy ianao Facebook / Instagram / DeviantArt. Fa izao fotsiny no holazaiko, io no ho tetikasa lehibe indrindra sy mitaky fatratra indrindra noforoniko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary mahavariana vita amin'ny sira nataon'i Dino Tomic